Diego Simeone Oo Qirtay Isku Daygii Uu Ku Doonayay Lionel Messi Iyo Qaabka Uu U Maray
HomeWararka CiyaarahaDiego Simeone oo qirtay isku daygii uu ku doonayay Lionel Messi iyo Qaabka uu u maray
Tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa qirtay inuu la hadlay Lionel Messi isagoo usii dhex maraya Luis Suarez markii ay Barcelona u sheegtay in aanay heshiiska u cusboonaysiinayn.
Lionel Messi ayaa xagaagii hore ka noqday Barcelona markii uu dhamaaday heshiiskiisu laakiin xilli uu naawilayey in qandaraaska loo kordhiyo ayay kooxdu u sheegtay in haba yaraatee aanay heshiis cusub siinayn, taas oo sabab u noqotay inuu soo afjaro 21 sannadood oo uu ka ciyaarayay Camp Nou.
Atletico Madrid oo haysata Luis Suarez oo ay saaxiibtinimo dhow ka dhaxayso Lionel Messi ayuu Simeone doonayay inuu meel iskugu keeno laakiin waxa uu marka hore iska hubiyey sida uu laacibka reer Argentina diyaar ugu noqon karayo inuu yimaaddo Wanda Metropolitano oo uu ka hor tago kooxdiisa hore.
Lionel Messi ayaa doortay inuu dibedda uga baxo Spain isla markaana uu ku biiro Paris Saint-Germain.
Diego Simeone oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey qisadan, waxaana uu xusay in ka hor intii aanay kooxdiisu isku dayin saxeexa Messi, uu door biday inuu usii maro Suarez oo uu weydiiyo haddii uu iman karayo Madrid.
“Anigu maan wicin Leo, laakiin waxaan la hadlay Luis oo aan weydiiyey sida uu yahay Messi iyo in uu xiisaynayo inuu sii joogo isla markaana ay jirto fursad uu ku imankarayo Atletico.” Ayuu yidhi Simeone oo waraysi siiyey wargeyska Ole.
“Waxay ahayd arrin kusoo dhamaatay saddex saacadood sababtoo ah PSG ayaa mar horeba qalbigeeda ku haysay, lana saxeexanaysay isaga.
“Sidaa darteed, fursadda aan kula shaqaynayn karayo Messi marnaba ma aanaan joojin.”